Phoenix OS safidy hafa tsara hananana Android amin'ny solosainao | Avy amin'ny Linux
Phoenix OS safidy hafa tsara hananana Android amin'ny solosainao
Darkcrizt | | Android
Android dia nanjary iray amin'ireo rafitra fiasa malaza indrindra manerantany, ity rafitra ity izy io dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny fitaovana finday toy ny Tablets sy Smartphone ary nanitatra ny tsenany hampiasaina amin'ny Smart TV sy famantaranandro marani-tsaina.
Tany am-piandohana dia tsy nisy fanohanana afa-tsy amin'ny fitaovana ampiasaina miaraka amina processeur ARM, saingy Noforonina ny fandikan-tsoratra Android rehefa mandeha ny fotoana izay azo apetraka amin'ny solosaina.
Tamin'ny fahatongavan'ireto kinova ireto ho an'ny solosaina, maro ny mpamorona no nanomboka namorona rafitra mifototra amin'ny Android ho an'ny solosaina Ny sasany amin'ireo malaza indrindra dia ny tetik'asa Remix OS.
1 Momba ny Phoenix OS
2 Phoenix OS Features
3 Fepetra takiana hametrahana Phoenix OS
4 Sintomy ny Phoenix OS
Momba ny Phoenix OS
Mampalahelo fa najanona ity tetikasa ity, fa manisa isika miaraka amin'ny solon'ny Phoenix OS hafa, ity dia rafitra iray nalaina tamin'ny tetikasa Android-x86.
Nieritreritra mamorona kinova Android manakaiky ny paradigma ary ny fomba fampiasana ny rafitra fikirakirana birao (Windows, Mac ary Linux).
Mba hamoronana ny rafitra tonga lafatra ho an'ny fitaovana izay misy eo anelanelan'ny fampiasana Tablet sy PC ity fifangaroan'ny birao sy sehatra finday ity, izay azo ampiasaina amin'ny endrika takelaka, solosaina finday, birao finday avo lenta ary fitaovana fampiratiana hafa lehibe.
Raha tsorina Phoenix OS dia afaka mihazakazaka amin'ny fitaovana miaraka amin'ny Intel x86 na ny processeur mitovy amin'izany. Izy io koa dia azo apetraka amin'ny kapila mafy ho an'ny fandidiana, tsy misy fiatraikany amin'ny rafitra voalohany.
tsara mandova endri-javatra sy asa maro amin'ireo rafitra fikirakirana solosaina manokana ary mifanaraka amin'ny rindranasa an-tapitrisany maro azontsika jerena ao amin'ny magazay fampiharana Android.
Amin'ny ankapobeny dia azo ampiasaina malalaka amin'ny tontolo iainana toa ny trano, birao, fanabeazana na zavatra hafa.
Ny fampiasana an'ity rafitra ity dia safidy lehibe hanomezana fiainana vaovao an'ireo solosaina manana loharanom-bola ambany ireo ary afaka hampiasa azy ireo amin'ny rafitra malaza be.
Miaraka amin'izany, ny mpampiasa dia manana fidirana amin'ny traikefa amin'ny rafi-miasa PC mahazatra sy ny fanohanana amin'ny fampiharana Android an-tapitrisany mahazatra, mamela azy io hampiasaina malalaka amin'ny tontolo iainana toa ny trano, birao na tontolon'ny fanabeazana.
Phoenix OS Features
phoenix os manome interface tsara somary kanto tena mahazatra ny rafitra miasa rehetra. Manana rohy haingana izy ireo ary manana topy maso haingana momba ny fisokafana misokatra avy amin'ny toerana ahafahanao manamboatra haingana ilay switch.
Izy io dia manana ny fanohanana amin'ny multi-windowsRehefa misokatra amin'ny varavarankely ny rindranasa tsirairay izay azo ovaina tanteraka amin'ny habeny, ary maro amin'ireo rindranasa no azo sokafana sy tantanana miaraka amin'izay.
Amin'ny fanombohana voalohany Phoenix OS dia manana fanohanan'ny teratany amin'ny teny sinoa sy anglisy, fa ny fiteny hafa dia azo alamina ao anaty rindrambaiko, avy amin'ny menio fanovana.
Fepetra takiana hametrahana Phoenix OS
Amin'ny maha rafitra mifototra amin'ny tetikasa Android x86 anao dia tena kely dia kely ny fepetra takiana ahafahanao mametraka an'ity rafitra ity amin'ny solosainao.
Ny solosaintsika dia tsy maintsy manana farafaharatsiny:
Mpangataka Intel x86 1Ghz fototra na avo kokoa
RAM 1 GB na mihoatra
Lahatsary 128MB na mihoatra
Kapila matevina 6 GB na mihoatra
Azontsika atao ny mametraka ity rafitra ity amin'ny solo-saintsika miaraka amin'ireo rafitra miasa hafa tsy mila manolo ireo iray efa napetrantsika, ka mahatonga azy io ho safidy tsara.
Azontsika atao koa ny mampiasa an'io rafitra io amin'ny milina virtoaly raha tsy te-hampandefitra ny angon-drakitra momba ny solosainantsika isika na tsy te hitsapa ny rafitra alohan'ny hametrahana azy amin'ny solo-sainao.
Sintomy ny Phoenix OS
Finalmente afaka mahazo ny sarin'ity rafitra ity isika hahafahana mametraka azy amin'ny solosaina avy amin'ny tranokala ofisialy, ihany tsy maintsy mandeha amin'ity rohy manaraka ity isika aiza no ahafahantsika misintona.
Ny rohy an'ny download ity.
Azonao atao ny mamakivaky ireo forum izay ahitanao ny kinova ARM amin'ity rafitra ity ho an'ny finday sasany toy ny maodely Nexus farany, na dia vao am-boalohany fotsiny ny fanampiana ary tena mety hahita olana isan-karazany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Android » Phoenix OS safidy hafa tsara hananana Android amin'ny solosainao
Xavi dia hoy izy:
Ao amin'ny rohy fampidinana dia atolotra ho an'ny Windows sy Mac fotsiny izy ireo, tena tsara ho an'ity pejy ity «Avy amin'ny Linux» ...
Valiny tamin'i Xavi
Andres Fernandez dia hoy izy:
Miarahaba anao, nampidina an'ity rafitra fiasa ity aho saingy rehefa manomboka voalohany aho dia mainty ny écran ary manisy teboka fotsy. Nieritreritra aho fa aorian'ny fotoana iray dia hanomboka ny rafitra fa rehefa afaka adiny 3 dia tsy nanomboka. Misy torohevitra ve? Ny solosainako dia manana Asrock N68-S UCC, mpanamboatra AMD Athlon II, fahatsiarovana 3 Gb, ary kapila mafy ho an'ny rafitra ihany. Niezaka ny nametraka azy avy tao amin'ny windows 10. Manantena aho fa afaka mitari-dalana ahy ianao. Misaotra ny fotoananao.
Valiny tamin'i Andres Fernandez
joaqocifmor dia hoy izy:
Mety ho olana amin'ny processeur satria mety ho antitra be izy ary tsy manaiky (angamba) sse4.1 na 4.2 ny iray hafa dia mety ho biôsy izay tsy mifanaraka tsara amin'ny rafitra
Mamaly an'i joaqocifmor
Jose Luis dia hoy izy:
Rafitra tena tsara dia napetrako fotsiny mba hizaha toetra azy ary tiako izany,
Valiny tamin'i Jose Luis
Raul C dia hoy izy:
Salama, manana an'ity emulator ity aho ary manana fanontaniana, nametraka ny WhatsApp aho fa tsy afaka mampakatra sary amin'ny toe-javatra satria tsy mahafantatra fakantsary ny WhatsApp, ahoana no hataoko any?
Valiny tamin'i Raul C
Ahoana ny fametrahana ny fiteny fandaharana Rust amin'ny Linux?
Warzone2100 lalao paikady sy tetika tena izy